Experiências no ar: WAA MAXAY SABABTA Ilaah wuxuu abuuray arooryadow - Calaamadaha muujinaya in ay aad ugu haysato sabtida
WAA MAXAY SABABTA Ilaah wuxuu abuuray arooryadow - Calaamadaha muujinaya in ay aad ugu haysato sabtida
WAA MAXAY SABABTA Ilaah wuxuu abuuray arooryadow
Dhulka waa habeen iyo maalinba. In boos gudcur jiro iyo Starlight. Hadda waxaan ogahay in Ilaah uu ku tarmo, oo sidaas daraaddeed ma shaqeeyaan, gudcurka. Haddii aadan samayn aad u jecel walaalkiis, gudcurkuu ku jiraa, oo Ilaah ma aha si fiican ugu shaqeyn ee uu noloshiisa.
Sida fiican ma u shaqeeyaan? Simple, haddii aad gudcurka ku jira (eber) Ilaah ma u shaqeyn doono sababtoo ah waa wax multiplier iyo isku dhufasho by eber waa eber, ie, aad gudcurka ku sii jirin.
Sidaas mucjiso ah ma aysan dhicin.
Maxaad, xataa koombiyuutarka salka waa eber iyo hal. Zero iftiinku kuma jiro iyo Nuurka, hab a.
Cadowga Ilaah waa Prince mugdiga, sababo kala duwan, sida dhexdhexaadnimada 9 (number Luciferian) ee xisaabta.
Sidaas oo ah in Ilaah loo baahan yahay isaga?
Wuxuu ahaa kii iftiinka, wax la mid ah 9 (1). Sida kii ka mid ah iftiinku uu gudcurka uga soo jeestay xagga Nuurka, isagoo intaa ku daray eber in hal, taas oo waa nuur.
Si aad u mugdi ah u beddesho xagga Nuurka, furay xaaladaha wanaagsan waayo, Ilaah in la ay awood tarmo tan iyo dhamaaday la neutralization ee eber ka shaqeeyaan, oo tarma natiijada mar walba siiyey wax ka yar hal.
Muhiimadda iftiinka waayo, Ilaah waa sida in talaabada ugu horeysa ee ahaa in Bilowgii: ". Iftiin ha ahaado"
Si la sii daayo si ay dalka ku joogsatay arooryadow kii Nuurka, transmuting kaliya ee Prince of mugdiga waayo, malaa'igta iftiinka, oo quruumaha oo dhan la diintooda iftiinka, Qorraxda iyo male-awaalka fudud ilaa xad la'aan khiyaamaa.
Calaamadaha muujinaya in ay aad ugu haysato sabtida
Calaamadaha in Ilaah idin ​​jecel yahay: 7, tirada Reebay Aabbaha
, Number 4 of jacaylka
7 saamiyada kudifaaca aad maskaxda
4 dureri dhexdeeda ku leeyihiin qalbigaaga
Ilaah u qabay = 7 * 4 ​​= 28
28 maalmood waa bisha Labiyo
28 qaybsanaanta waxaa u dhexeeya farihiisa, iyadoo la eegay dhinaca timirta
kuwaas oo 28 maalmood Labiyo, 24 maalmood ka dib si aad u shaqeeyaan
iyo 4 maalmood oo fasax ah
Ilaalinta sabtida ee Axdiga Hore
4 maalmood ah si loo badbaadiyo waa afar Sabtida ee bisha
Save Sabtida = note in suul waxaa laga soocay faraha kale
Waxaa jira 2 qaybsanaanta ee suulka kasta oo isku darkoodu 4 = 4 Sabtida
Postado por Serv Ice às 08:26